Gcwalisa uluhlu lweempazamo ngenxa yenkohliso yeFayile ye-MS Excel
Ikhaya iimveliso DataNumen Excel Repair Gcwalisa uluhlu lweempazamo
Gcwalisa uluhlu lweempazamo ngenxa yenkohliso kwiFayile yeMicrosoft Excel
Xa usebenzisa iMicrosoft Excel ukuvula i-xls ye-Excel eyonakeleyo okanye ifayile ye-xlsx, uya kubona imiyalezo yeempazamo eyahlukeneyo, enokuthi ikudide. Ke ngoko, apha siza kuzama ukudwelisa zonke iimpazamo ezinokubakho, zilungiswe ngokwamaxesha aqhubekayo. Ungasebenzisa isixhobo sethu sokubuyisa i-Excel DataNumen Excel Repair ukulungisa ifayile ye-Excel eyonakeleyo. Apha ngezantsi siza kusebenzisa 'igama lefayile.xlsx' ukubonisa igama lakho lefayile elonakeleyo.
I-Excel ayinakuvula ifayile 'igama lefayile.xlsx' kuba ifomathi yefayile yolwandiso lwefayile ayisebenzi. Qinisekisa ukuba ifayile ayonakaliswanga kwaye ulwandiso lwefayile luhambelana nefomathi yefayile. (Impazamo 101590)
I-Excel ayinakuvula le fayile. Ifomathi yefayile okanye ulwandiso lwefayile alusebenzi. Qinisekisa ukuba ifayile ayonakaliswanga kwaye ulwandiso lwefayile luhambelana nefomathi yefayile.
Ifayile yonakele kwaye ayinakuvulwa.
Le fayile ayikho kwifomathi ebonakalayo.
Ifayile ye-Excel ayikho kwifomathi ebonakalayo.
I-Excel ifumene umxholo ongafundekiyo kwi .
'igama lefayile.xls' alinakufikelelwa. Ifayile inokufundwa kuphela, okanye unokuzama ukufikelela kwindawo yokufunda kuphela. Okanye, iseva uxwebhu olugcinwe kuyo isenokungaphenduli.
IMicrosoft Excel iyekile ukusebenza.
Isiguquli asiphumelelanga ukuvula ifayile.
Isiguquli esiyimfuneko ukuvula le fayile asifumaneki.
Sifumene ingxaki ngomxholo othile 'kwifayile yegama.xlsx'. Ngaba ufuna ukuba sizame ukubuyela kwimeko yesiqhelo kangangoko sinakho? Ukuba uyayithemba imvelaphi yale ncwadi yomsebenzi, cofa u-Ewe.
Uxolo, asifumananga igama lefayile.xlsx. Ngaba kunokwenzeka ukuba yahanjiswa, yaphinda yanikwa igama kwakhona okanye yasuswa?